» Dhageyso:Shaqsi loo saadaalinaayay in Madaxweynaha cusub noqdo oo shaacin rabo in Utanaasulay….Badweyntimes.com
Dhageyso:Shaqsi loo saadaalinaayay in Madaxweynaha cusub noqdo oo shaacin rabo in Utanaasulay….
Feb 6, 2017 - jawaab
In kayar 48 saac ayaa kahartay xiliga loo qorsheeyay in ay dhacdo doorashada madaxweynaha soomaaliya kasoo utaaganyihiin musharixiin aad u farabadan oo kamidyihiin kuwa hore xilal kala duwan usoo qabtay.
Musharixiintaas ayaa waxa kamid ah ahaa maalqabeen siweyn loogu saadaalinaayay in oo kusoo baxo doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa lasheegaya in haatan u tanaasuli rabo madaxweyne Xasan sheekh.
Maalqabeenkan oo lagu magacaabo C/llaahi Cali Axmed (Caddow Cali Gees) aya lasheegaya in kahor doorashada kudhawaaqi doono in oo isaga haray doorashadaasi.
Musharax Caddow Cali Gees ayaa ka mid aheyn isbaheysiyada ay sameynayaan Musharaxiinta kale ee ka soo hor-jeeda Madaxweyne Xasan Sheekh, isagoo aan lagu arkin kulamadooda musharaxiinta ay yeelanayeen, waxaa loo arkayay inuu ahaa Musharax iskiis u taagan.
Khudbadii uu ka jeediyay Sabtidii Baarlamaanka oo aheyd mid iska koobneyd, ayaa aad uga duwaneyd khudbadaha kale ee Musharaxiinta oo si kulul u weerarayay Madaxweyne Xasan Sheekh 4-tii sano ee uu xilka hayay.
Sabtidii la soo dhaafay ayay aheyd markii uu tanaasul sameeyay Musharax Eng. C/llaahi Cali Xasan oo ku heyb ah Madaxweyne Xasan Sheekh, waxaana la sheegayaa in tanaasulkiisa ay ka dambeysay wada hadalo muddo socday oo lagaga dhaadhicinayay inuu ka tanaasulo Musharaxnimada, si uusan booska ugu ciriirin Musharaxa ay isku heybta yihiin.
« Warbixinta Ka HoreysayDaawo: Ciidanka Itoobiya oo si xun u jirdilay Nabadoon Soomaali ah lana soo bandhigay…
Warbixinta Xigto »SAWIRO: Wiil Asalkiisa Soomaali ah oo Mindi ku dilay Haweeney Mareykan ah…